Amathrendi amane we-E-Commerce Okufanele Uwamukele | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 4, 2019 NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 ULaura Himmer
Imboni ye-e-commerce kulindeleke ukuthi ikhule ngokuqhubekayo eminyakeni ezayo. Ngenxa yentuthuko kwezobuchwepheshe nokwehluka kwezintandokazi zokuthenga zabathengi, kuzoba nzima ukubamba izinqaba. Abathengisi abahlonyiswe kahle ngamathrendi nobuchwepheshe bamuva bazophumelela kakhulu uma kuqhathaniswa nabanye abathengisi. Ngokwombiko ovela ku- Isitatimende, imbuyiselo yezentengiselwano e-commerce yomhlaba izofinyelela ku- $ 4.88 trillion ngo-2021. Ngakho-ke, ungacabanga ukuthi imakethe izoguquka ngokushesha kangakanani ngobuchwepheshe bamuva nezitayela.
Umphumela Wobhadane Kwezokuthengisa kanye ne-E-Commerce
Abathengisi baseMelika basendleleni yokuvala izitolo ezingama-25,000 kulo nyaka njengobhadane lwe-coronavirus upends imikhuba yezitolo. Lokhu kuphindwe kabili kunezitolo ezingama-9,832 ezavalwa ngo-2019, ngokusho kweCoresight Research. Kuze kube manje kulo nyaka amaketanga amakhulu aseMelika amemezele ukuvalwa unomphela okungaphezulu kuka-5,000.
Kanye nokwesaba ubhadane, ukuvalwa kwendawo kwasheshisa ukushintshwa kwabathengi ukuthenga online. Izinkampani ebezilungisiwe noma ezishintshelwe ngokushesha ekuthengisweni kwe-inthanethi ziye zachuma ngesikhathi sobhadane. Futhi akunakwenzeka ukuthi lolu shintsho ekuziphatheni luzokwehla emuva njengoba izindawo zokuthengisa zivuleka futhi.
Ake sibheke ezinye zezindlela ze-e-commerce ezivelayo okufanele uzilandele.
The Isimo Sombiko We-e-Commerce Wango-2018 ithole ukuthi izinkampani ze-ecommerce eziyi-16.4% bezisebenzisa ukuthunyelwa okuthekelwa okuvela ezitolo ezingama-450 online. Ukudonswa kwemikhumbi kuyimodeli yebhizinisi esebenzayo yokunciphisa izindleko zokusungula nokwandisa inzuzo yakho. Amabhizinisi anemali encane ayasizakala ngalolu hlobo. Isitolo esiku-inthanethi sisebenza njengomuntu ophakathi nendawo phakathi komhlinzeki nomthengi.
Ngamazwi alula, ukumaketha nokuthengisa kwenziwa nguwe ngenkathi ukuthunyelwa kwenziwa ngqo ngabakhiqizi. Ngakho-ke, wonga imali ekuhanjisweni futhi, ekuphatheni uhlu lwezitolo noma izindleko zalo zokuphatha.
Kule modeli, abathengisi abakwi-inthanethi banobungozi obuncane nenzuzo engcono njengoba uzobe uthenga umkhiqizo kuphela ngemuva kokuthi ikhasimende lakho selifake i-oda. Futhi, kunciphisa izindleko eziphezulu. Abathengisi be-E-commerce asebevele basebenzisa le ndlela futhi benza impumelelo enkulu yi-Home Depot, Macy's kanye nabanye abambalwa.
Ibhizinisi eliku-inthanethi elisebenzisa okuhlangenwe nakho kokudonsela phansi ukukhula kwemali engenayo eyi-32.7% futhi libe nezinga lokuguqulwa elijwayelekile lika-1.74% ngo-2018. Ngamazinga enzuzo anjalo, imakethe ye-e-commerce izobona amamodeli amaningi wokuthumela eminyakeni ezayo.
I-intanethi itholakala kalula emhlabeni wonke, kepha abathengi basebenzisa iziteshi eziningi ukuthenga. Eqinisweni, ngokusho kwe- Umbiko Wokuthenga Omnichannel, cishe abathengi abangama-87% e-United States okungaxhunyiwe ku-intanethi abathengi.
Abathengi abangama-78% bathe bathenga ku-Amazon
Ama-45% wabathengi athengwe esitolo esine-inthanethi
Ama-65% wabathengi athengwe esitolo sezitini nodaka
Abathengi abangama-34% bathenga ku-eBay
U-11% wabathengi uthenge ngeFacebook, kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi yi-f-commerce.
Uma ubheka lezi zinombolo, abathengi bakuyo yonke indawo futhi bakhetha ukufinyelela kwimikhiqizo kuzingxenyekazi zonke lapho bengakuthola khona. Ubuhle bokuba khona nokutholakala ngeziteshi eziningana kungakhuphula ibhizinisi lakho ngemali engenayo enkulu. Abathengisi abaningi be-inthanethi baphendukela ekuthengiseni iziteshi eziningi… nawe kufanele.
Iziteshi ezidumile zifaka i-eBay, i-Amazon, i-Google Shopping, neJet. Iziteshi zokuxhumana zenhlalo ezinjenge-Facebook, i-Instagram, ne-Pinterest nazo ziguqula umhlaba we-e-commerce ngesidingo sawo esikhulayo.
Isifundo esivela I-Baymard Institute kutholakale ukuthi cishe ama-70% ezinqola zokuthenga zilahlwa nge-29% yokulahlwa okwenzeka ngenxa yenqubo enkulu yokuphuma. Ikhasimende lakho, ebelikulungele ngokuphelele ukuthenga, lishintshe umqondo walo ngenxa yenqubo (hhayi intengo nomkhiqizo). Njalo ngonyaka, abathengisi abaningi balahlekelwa amakhasimende ngenxa yenqubo ende noma ematasa yokuthenga.
Ngo-2019, abathengisi kulindeleke ukuthi babhekane nalesi simo ngokushelela ngezinyathelo zokuphuma nezokukhokha ezilula. Abathengisi abakwi-inthanethi bazothatha igxathu eliya phambili ukwenza ngcono inqubo yabo yokuphuma ukuyenza iphephe kakhudlwana, ilula, futhi ilungele amakhasimende abo.
Uma unesitolo esiku-inthanethi esithengisa umhlaba wonke, kuyasiza ukuba nenketho yendawo yokukhokha kumakhasimende akho omhlaba jikelele. Indlela engcono kakhulu ukuhlanganisa izinkokhelo zakho zibe yipulatifomu eyodwa, unikeze inqubo yokukhokha ebushelelezi kumakhasimende akho emhlabeni jikelele.
Okuhlangenwe nakho komuntu siqu
Ukuphatha amakhasimende akho ngokukhethekile kuyisihluthulelo sempumelelo kunoma yiliphi ibhizinisi. Emhlabeni wedijithali, ikhasimende elinelisekile isu lokukhangisa elisebenza kahle kakhulu. Ukutholakala kuzo zonke iziteshi akwanele, kufanele uqaphele ikhasimende lakho kungxenyekazi ngayinye futhi ubanikeze ukwelashwa okukhethekile ngokuya ngomlando wabo wangaphambilini kanye nawe.
Uma ikhasimende elisanda kuvakashela umkhiqizo wakho ku-Facebook, ngokwesibonelo, livakashela iwebhusayithi yakho, nikeza lolo lwazi lwamakhasimende ngokususelwa ekuhlanganeni kwabo kokugcina ababenakho. Yimiphi imikhiqizo obuyibonisa? Yikuphi okuqukethwe ebenixoxa ngakho? Okuhlangenwe nakho kwe-omni-channel kuzoshayela ukuzibandakanya okukhulu nokuguqulwa.
Ngokuya ngocwaningo lwe-Evergage, kuphela ama-27% wabakhangisi abavumelanisa uhhafu noma ngaphezulu kweziteshi zabo. Kulo nyaka, uzobona ukunyuka kwalesi sibalo njengoba abathengisi begxile kakhulu ekuqondisweni okuqhutshwa yi-AI ukubona amakhasimende abo eziteshini ezahlukahlukene. Lokhu kuzoba ngomunye wemikhuba e-commerce ethandwa kakhulu ngo-2019 okufanele uyilandele.
Ithiphu Yokugcina Yezomnotho
Lawa ngamasu amane we-e-commerce ahamba phambili okufanele awalandele eminyakeni ezayo. Ukuhlala uvuselelwa ngobuchwepheshe kuyindlela engcono yokugcina ibhizinisi lakho eliku-inthanethi lichuma ngokuzayo. Ungahlala uthatha igxathu eliya phambili ngokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende akho. Qiniseka ukuthi uhlola izivakashi zakho ukuthola ukuthi uqhuba kanjani ku-inthanethi. Ukuba nempendulo ngesikhathi esifanele evela kumakhasimende angahleliwe kungakunika ukuqonda okuhle ngesimo sebhizinisi lakho emakethe.
Tags: Amazonisikhungo se-baymardI-BigCommerceinqubo yokuphumaUkuthumela ukudonsaeBayukuphuma kwe-ecommerceizitayela ze-ecommerceukuthengisa ama-multichannelukuzenzelaPinterest